Isu tinopa zvisingabatika zvinhu zvisingachinjiki zvinhu. Semutengi iwe une basa rekunzwisisa izvi pakutenga chero chigadzirwa / sevhisi panzvimbo yedu.
CONTACT Kasitoma MUTSIGIRI
99% yematambudziko anogona kugadziriswa neiri nyore email. Tinokumbira kuti usvike kwatiri uchishandisa yedu "Taura nesu”Peji. Yedu Vatengi Dhipatimendi Dhipatimendi inodzokera kwauri mukati me24-48 (kazhinji isingasviki maawa makumi maviri nemana) nekudzokororwa kwekunetseka kwako, uye mhinduro.
Kwete-kuendesa kwechigadzirwa / sevhisi: mune dzimwe nguva nguva dzekuita dzinononoka, uye zvinogona kutora nguva yakati rebei kuti odha yako ipedze. Mune ino kesi, tinokurudzira kuti utibata nesu kuti tibatsirwe Mhosva dzekusatumirwa dzinofanirwa kuendeswa kune vedu Vatengi Dhipatimendi Rekunyora nekunyora mukati memazuva manomwe kubva pakuisa odha.
Chigadzirwa kwete-se-chakatsanangurwa: nyaya dzakadai dzinofanirwa kutaurwa kuDhipatimendi reVatengi Vedu mukati memazuva manomwe kubva pazuva rekutenga. Uchapupu hwakajeka hunofanirwa kupihwa kuratidza kuti chakatengwa chigadzirwa / sevhisi haina sekutsanangurwa pawebhusaiti. Zvichemo izvo zvinovakirwa chete pane zvakatarisirwa nevatengi zvisiri izvo kana zvishuwo hazvikudzirwi.
Mutengi anoda kudzima kubhadharazve kubhadharwa kwechigadzirwa / sevhisi uye ari mukati memazuva manomwe ekubhadharwa kwekupedzisira. Kana chikumbiro chikaitwa chekudzoserwa mushure memazuva manomwe mutengi haana kukodzera, asi kukanzurwa kunozadzikiswa pane ese emangwana ekubhadharisa. Mutengi anogona kuenderera achigamuchira sevhisheni kusvika kumagumo ebhajidhi yavo, kana kusarudza kumisa pakarepo kwechigadzirwa / sevhisi.
Isu tinomira kumashure kwezvakagadzirwa uye tinodada kuendesa yepamusoro yepamusoro midhiya yekubatika masevhisi pamhepo nhasi. Hatigone kupa mari yekudzosera, asi kana mukati memazuva manomwe usiri kufara neyako odhita Taura nesu uye isu towana mhinduro kune zvaunoshushikana.